Mampifandray ny Catenas amin'ny Rothschild ny divay: Midira amin'ny CARO Vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Mampifandray ny Catenas amin'ny Rothschild ny divay: Midira amin'ny CARO Vaovao
Vaovao Mafana Arzantina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Vaovao farany Brezila • Vaovao • People • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • Divay & Fanahy
LR - Dr. Nicolás Catena sy Baron Eric de Rothschild
Aza misalasala miantso ahy ho snob divay! Rehefa manamarika aho fa ny divay dia vokarin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Domaine's Barons de Rothschilds (Lafite) sy ny fianakavian'i Arzantina Catena - Ahodikodiko ny zavona avy any anaty ati-doha COVID ary voamariko, satria ny fianakaviana roa dia tao amin'ny varotra divay hatramin'ny Taona 1800.
Ny Rothschilds dia nanitatra ny fahalianany tany amin'ny tanimboaloboka ankoatra an'i Frantsa nandritra ny am-polony taona maro.
Ny fifandraisana amin'ny Catenas sy ny Malbec azy ireo dia nanomboka tamin'ny taona 1999, tokony ho 11 taona talohan'izay (1988), satria ny Rothschilds dia nahazo an'i Vina Los Vascos tany Silia.
Tamin'ny taona 2008, niara-niasa tamin'ny CITIC sinoa, ny Rothschilds dia nanomboka tanimboaloboka tao Penglai, Sina, izay somary lavidavitra an'i Penglai eo afovoan'ny faritra arovana 377 hektara.
Ny tena marihina sy manamarika ny fifandraisana amin'ny orinasa Catena dia i Jancis Robinson nilaza fa i Nicolas Catena Zapata dia «… amin'ny fametrahana divay Arzantina amin'ny sari-tany. Larry Stone ao amin'ny James Beard Foundation dia nanapa-kevitra fa i Nicolas Catena Zapata dia ao amin'ny ligy mitovy amin'i Robert Mondavi amin'ny famolavolana ny sehatry ny divay Napa, "mitaona ny faritra iray manontolo mba hiezaka hanana kalitao avo kokoa…"
Ny marika "Caro" dia fifangaroan'ny anaran'ny fianakaviana roa - Catena sy Rothschild ary ny fampidirana ny fahaizan'i Rothschild, ny famatsiam-bola, ny varotra ary ny fampiasam-bola hafa dia nahatonga ny divain'i Catena hifindra amin'ny sehatra hafa ary hahafahan'ny fikambanana manao ilay "kanto indrindra divay avy any Arzantina”(Laura Catena).
Mitodika any aoriana. Mandrosoa
Ny ampahefatry ny divay vao amidin'i Arzantina. Ilay firenena no mpamokatra divay ambony any Amerika Latina ary fahadimy lehibe indrindra manerantany. Ilay faritra maniry divay, any an-dohasaha Andean Mountain, dia ampitahaina matetika amin'ny Lohasaha Napa any California. Ny faritanin'i Mendoza sy San Juan, ivon'ny divay ao amin'ny firenena, dia malaza manerantany ho an'i Malbec, ary koa Bonarda, Syrah ary Cabernet Sauvignon. Mahaliana ny manamarika fa i Malbec dia divay manan-danja tany Bordeaux mandra-pahatongan'ny aretina sy ny bibikely dia nanjary nihena ny voaloboka. Ny karazany Bordelaise dia nentin'ny Frantsay tany Arzantina tamin'ny tapaky ny taona 1800 izay nisy ny fifaliana. Tsy misy na iray aza amin'ireo olana nampahory an'i Malbec frantsay tany an-kavoana Andes satria ny tanimboaloboka Arzantina dia nambolena teo ambonin'ilay tsipika raha tsy afaka niparitaka ny bibikely ary ny lembalemba an-tendrombohitra dia manome tara-pahazavana mahery tsy misy fanelingelenana sy mahery.
Ny indostrian'ny divay Arzantina dia nahazo fitsaboana manokana avy amin'ny governemanta nasionaly manamafy izany amin'ny korontana ara-toekarena misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Nanapa-kevitra ny governemanta fa tokony havela hiasa ny famiazam-boaloboka satria ny fanaovana divay dia "hetsika tena ilaina" ahafahan'ny ankamaroan'ny orinasa famokarana divay miasa tsy tapaka mandritra ny areti-mandringana.
Ny lockdown dia nitombo ny fanjifana divay tao amin'ny firenena izay nampiseho fitomboana 7 isan-jato tamin'ny taona 2019 raha toa ka 8.83 tapitrisa hectoliters ny varotra divay, raha 8.4 tapitrisa hectoliters kosa no voarakitra tamin'ny taona 2018. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Aogositra 2020 dia nahatratra 6.21 tapitrisa hectoliters ny varotra divay. Amin'ny isan'olona, ​​amin'ny taona 2019, ny fisotroana divay isaky ny kapita any Arzantina dia 19.5 litatra isan'olona, ​​hatramin'ny 18.0 litatra isan'olona olona voarakitra herintaona talohan'izay. Azo antoka fa nahafaly ireo mpanamboatra divay ity satria ampahefatry ny divay amidin'i Arzantina fotsiny ivelan'ny firenena. Ny fanondranana divay dia nitombo 21 isan-jato nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny novambra raha oharina amin'ny fihenan'ny eran-tany efa ho 6 isan-jato (Instituto Nacional de Vitivinicultura).
Ny fianakavian'i Catena dia nahazo lanja tanteraka an'io fanavahana io (amin'ny maha mpamokatra sakafo) ary tamin'ny fiandohan'ny Covid (20 martsa 2020) dia nisaron-tava sy fonon-tànana ny mpiasa ary nankany amin'ny tanimboaloboka mba hanangona ny voaloboka sisa tavela amin'ny fotoam-pijinjana miavaka.
Ny zava-doza ho an'ny faritra hafa ao Arzantina dia nanjary traikefa tsara ho an'i Caro tamin'ny 1 aprily, Drinks International, nanambara fa Catena Zapata dia nifidy ny The World Most Admired Wine Brand (2020) avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena mpividy zava-pisotro sy manam-pahaizana momba ny divay. , ao anatin'izany ireo matihanina amin'ny divay avy amin'ny firenena 48 samihafa.
Akaiky akaiky sy manokana
Hatramin'ny niandohan'ny taonjato faha-20 (1902) dia nalaza ny famokarana divay Catena noho ny fanesorany an'i Malbec hanohana ny ainy sy ny fanekeny ny sandan'ny terroirs avo lenta any amin'ny faritra Andean ao Mendoza, Arzantina.
Nicolas Catena, mpanamboatra divay fianakavianana fahatelo, no Arzantina voalohany nanondrana tavoahangy Malbec kilasy an'izao tontolo izao niaraka tamin'ny marika Catena. Androany izy sy ny zanany vavy Dr. Laura Catena dia manohy manitatra ny tratran'ny divay Caro. Ny lehiben'ny mpamokatra divay, Alejandro Vigil dia nanatevin-daharana an'i Catena Zapata tamin'ny 2002
Ny Andrianna Vineyards dia efa ho 5000 metatra ny haavony ary fantatra amin'ny anarana hoe Grand Cru any Amerika atsimo.
Ny haavony avo kokoa dia mandrisika ny voaloboka Malbec hanana asidra manatsara ary noho izany dia mamy kokoa amin'ny tsiro izy ireo. Ny hoditra matevina dia mamorona voaloboka be mifangaro sy manome tsiro, manome divay mamy. Koa satria Malbec feno vatana, velona ary feno voankazo, ny firafitra sy ny toetran'ny voadio Cabernet Sauvignon dia mankasitraka ary manatsara ny divay farany.
Ny varietal tokana novokarin'i Caro dia Aruma miaraka amin'ireo divay hafa dia fifangaroan'ny voaloboka roa, Malbec (herinaratra famonosana, fahasahiana ary voankazo), ary Cabernet Sauvignon (firindrana manampy sy fahaizana).
Ny voaloboka rehetra ho an'ny divay Caro dia raisina am-pelatanana sy alahatra alohan'ny famoahana sy fanorotoroana manala ny fahafahan'ny voaloboka simba sy taham-boankazo hiditra ao amin'ilay fangaro, mamorona tontolo iainana tonga lafatra amin'ny divay saro-pady sy malefaka.
• Bodegas Caro Aruma (alina: tenin'ny Mendoza teratany indianina) 2019. Malbec 100 isan-jato avy any Valle de Uco (Altamira, El Peral ary San Jose). Tsy voaporofo.
Anarana voafantina ho toy ny tandindon'ny rivotra maizina sy madio an-tendrombohitra fatratra amin'ny alina Andes. Voadio amin'ny fiara mifono vy tsy misy fangarony ary antitra amin'ny tanky simenitra mitazona ny divay amin'ny hafanana tsy tapaka. Tonga ny voaloboka Malbec any Argentina misaotra ny agronomista frantsay iray izay nanamarika ny fahafahan'ny voaloboka maniry amin'ny fomba mahomby amin'ny tontolon'ny havoana Mendoza (1868).
Manamarika voaroy mena mainty ny maso raha mahita blackberry, dipoavatra mainty, plum, voankazo mena, masitra misy zava-manitra (mahafinaritra) ary volomparasy ny orona. Mahafaly ny felatanana, ity divay ity dia manome cranberry, blueberry ary tannins vitsivitsy. Diniho fa fanandramana tsiro Malbec tena izy. Manokatra ora vitsivitsy alohan'ny hanombohan'ny sipa rehefa misokatra izy ary manome traikefa matsiro am-bava. Amboary miaraka amina cheeseburger manga na akoho barbeque.
• Bodegas Caro Amancaya (voninkazo Andes voninkazo) 2018. Malbec 70 isan-jato, Cabernet Sauvignon 30 isan-jato. Ny voaloboka dia voajinja avy amin'ny karazam-boaloboka tranainy ao Lujan de Cuyo, sy Altamira. Ao Lujan, ny voaloboka dia maniry amin'ny sosona loam, vato ary vatokely; any Altamira, ny tanimboaloboka dia miorina 100m ambonin'ny haavon'ny ranomasina eo amin'ny fandriana alluvial taloha amin'ny Reniranon'i Tunuyan. Napetraka ho matotra amin'ny barika oaka (vaovao 20 isan-jato) mandritra ny 12 volana mamorona tannin tena tsara. Ny barila dia nataon'i Lafite Rothschild any Frantsa. Ny taom-boaloboka voalohany amin'ity divay ity dia tamin'ny 2003. Ity divay ity dia heverina fa manana ny "toetran'ny Arzantina sy ny fomba Bordeaux" (Lafite.com).
Ny fiangaviana amin'ny masony dia mahatonga azy io handeha - divay raha mena mena no safidinao loko. Amin'ny alàlan'ny fihobiana amin'ny orona, ny divay dia manome kakao, aviavy, voankazo mena ary kanelina ary farany amin'ny voankazo mainty am-bava miaraka amin'ny hazo terebinta amin'ny anjara asa manohana. Ora misokatra (na andro) alohan'ny fisotroana - arakaraky ny habetsahan'ny rivotra voarainy no mahasoa kokoa azy amin'ny tsiro sy ny fahasarotana. Amboary miaraka amin'ny barbeque, taolan-tehezana, saosisy na tapa-janak'ondry
• Bodegas Caro 2017. Malbec 74 isan-jato, Cabernet Sauvignon 26 isan-jato. Nahatratra farafahakeliny farafahakeliny nandritra ny 1.5 taona tamin'ny barila, vaovao 80 isan-jato.
Mijanòna! Tsy maintsy mankafy ny loko volomparasy mainty tsara an'ity divay ity ianao. Avelao ny oronao hanao ny asany… mahita fangaro fofona manolotra fofona voaroy, dipoavatra mainty, volomparasy, jirofo ary sôkôla mainty manankarena. Ny taninina malefaka dia mamelombelona ny lanilaniny ary mifangaro matsiro amin'ny asidra mamelombelona. Misaotra anao noho ny sakaizany vaovao ny steak-nao.
Io divay io dia voafetra ny famokarana ary tsy mivoatra isan-taona. Mahalana izy io satria avy amin'ny fizarana terroir manokana. Ny tendrombohitra sy ny orana dia zara raha ao Mendoza ka rehefa avy ny orana - dia mavesatra be izy io, ary ny tany dia tsy vonona hisitrika ny rano rehetra mamorona renirano izay midina hatrany Andes. Ny renirano tao anatin'izay taonjato lasa izay dia namorona mpankafy tohovial niditra tao anaty renirano, ary ny mpankafy dia manana tany samihafa ka mahatonga ny fahalalana ny tany ho zava-dehibe. Ny voaloboka Caro dia maniry amin'ny tanimboaloboka amin'ny habaka miavaka noforonin'ny tany ambanin'ny tany. Ireo voaloboka ireo dia maniry amin'ny tany calcareous, izay misy kalsioma, vatosokay manan-kaly. Ny divay dia antitra amin'ny barila alohan'ny tavoahangy.